Baby Calendar - handmade Baby Photo Calendar Mark Taariikhaha Muhiimka ah
> Resource > Talooyin > Samee Calendar Baby lagu maamuusayay Taariikhaha Muhiimka ah
Hal ilmo haysato waa dhacdo weyn oo qoyska oo dhan. Laga soo bilaabo uurka si carruurnimada, waxaad u baahan tahay inaad bixiso si ilmahaagu taxadar ah. A jadwalka ilmaha ka caawisaa si fiican ayaad u habayn taariikhaha sabab iyo sidoo kale xusuusan taariikhaha muhiim guuradii.
Uurka Photo Calendar
Taariikhda ugu muhiimsan ee uurka waa taariikhda la filayo bixinta (EDD) taas oo ah 38-40 todobaad laga bilaabo maalinta ugu horeysa ee aad caadadaada dhiigga ee la soo dhaafay (LMP). Laakiin taariikhda kasta oo dhab ahaantii waa mid aad u muhiim ah sababta oo ah ilmahaaga u baahan wanaagsan wanaajiyo daryeelka dhalmada ka hor. Sidaas waxa lagu soo jeediyay in aad ku darto macluumaad ku saabsan sida ilmahaagu waxa uu yeelan doonaa todobaadka toddobaadka ee calendar uurka . Waa fikrad fiican in lagu daro qaar ka mid ah sawir midab in Calendar sababtoo ah ilmuhu jecel yahay inuu u daawado markii ay dareemi karaa adduunyo.
Ilmahaaga First Year Calendar
Ka hor inta sanad guurada dhalashadiisa koowaad ee ilmahaaga, waxaa jira Dhacdooyin badan oo hore ee ilmahaaga iyo inaad la kulanto iyo dabaal. Si fudud calaamadee taariikhaha gaar ah oo ku saabsan jadwalka ilmaha taas oo shaki ay noqon karto oo maal matalno waqti nolol. Waxa kale oo hab wanaagsan oo ay ula socdaan ilmahaaga maalin horumarka ay maalin.
Talaabooyinka sahal in la sameeyo a Calendar cute Baby
Inta aad iibsan kareyso taariikh ilmaha horay loo daabacay dukaanada waaweyn, sababta aan sameeyo jadwal shakhsiyeeyo ilmaha in uu yahay mid gaar ah ee ilmahaaga. Waxaad soo dhoofsadaan kartaa sawiro jecel; darto macluumaad waxtar leh; iyo xitaa waxaa ka mid ah gabayada aad ugu jeceshahay. Tallaabooyinka soo socda ayaa kugu hagi doona sida loo sameeyo jadwal cute ilmaha la iCollage for Mac .
Talaabada 1: Dooro template kaalandarka ilmahaaga ku haboon
Marka aad la abuuro collage sawir ka foom oo ah, suuqa kala hoos ku tusi doonaa. In la abuuro taariikh shakhsi ilmaha sawir, u tag Calendar dooro template jadwal si ay u bilaabaan collage kaalendarka ka soo template ah.
Baby Calendar Talooyin:
1. Guji ka link hoose ka tagay ' Download All arrimo 'si aad u hesho dhammaan Foomamka heer sare oo lacag la'aan ah.
2. Isticmaal joog marto si ay u abuuraan kala duwan-page jadwalka sawir oo daabacan oo aad printer.
Talaabada 2: sawiro Import galay template jadwalka
Si fudud u jiidi & hoos u sawirka bogga sawrirrada jadwalka ama double thumbnail Riix sawirka si sawir ku darto. The .jpg taageero barnaamijka, .bmp, .png, .emf, .wmf, iyo qaabab sawir .tiff caan ah.
1. Haddii sawirka jadwalka aad u ballaaran yahay in la joogo buuxa ee ku yiilleen, Out guji badhanka Zoom in qalab edit sawirka Mozilla soo baxay sawir ee ku yiilleen.
2. By iskutallaabta cagaaran sawir ku saabsan, inaad la qabsato karo booska uu ka sawirka ku yiilleen. 3. Waxaad samayn kartaa jadwalka sawir sanad kasta oo aad rabto. Si aad u dhigay sanad, dooro bil kasta oo riix badhanka ugu horeysay ee bar qalab smart. Isticmaal hab la mid ah si ay u qeexaan bilaha sannaddii oo dhan. Xataa waxaad ka qaadan kartaa oo dhan bilood muhiim ah in bog hal.
Talaabada 3: badbaadi sida sawirka jadwalka ama si toos ah u daabacdo
Ka dib markii jadwalka ilmaha, waxaad badbaadin kartaa in ku dhowaad dhammaan caadi qaabab graphic ka dibna u soo dir email ama si toos ah uga dhigin sidii wallpaper desktop. Halkan waxaan u daabac leh printer ah ugu xiran. Hubi printer si fiican u shaqaynayaan ka hor inta print.
Waayeen Waxaad print hal bog ama bogag badan jadwalka ay la tilmaamayo bogagga dhex Select Page button. Hanuuninta iyo qaabka muhiim ah in la daabaco jadwal ilmaha kaamil ah. Qaar ka mid ah template jadwalka ilmaha, waxaad u baahan tahay astaysto khariidad (khariidad hoose midig) si aad u hesho daabacayaa kaamil ah.